Murtida Jimcaha “Abwaan Qamaan Bulxan” |
Tuke Somalism — October 16, 2015
Murtidada jimcaha waxaan ku soo qaadan doonaa xasuusihii abwaankeena weyn Qamaan bulxan. Markii aan maqlo odhaahda Soomaaliyeed ee ah rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi waxaa maskaxdayda kusoo degdega magaca Qamaan Bulxan Yuusuf. Qamaan wuxuu ahaa geesi aan ishiisa mudac marin, Aftahan geed ka hadal ah oo aan la’aantii xaajo Qorraxeey ka gu’in, maalqabeen shaarubaha xoori caddaysay, siyaasi iyo hoggaamiye in badan ka horreeyey xilliggii iyo dadkii uu ku dhex noolaa, gabayaa aad is odhanayso gabaygu abxad furaheeda kaligii uu hayso ayuu ugu qufulan yahay iyo waayo-arag aad ku dhaaranayso inuu dunida oo dhan cagta mariyey wallow uusan degaankiisa iyo inta dariska la ah dhaafin.
Intaa aan Qamaan ku tilmaamay iyo dheeriba waxaad ka fahmi kartaa gabayadiisa 60ka kor u dhaafay ee Soomaali idilkeed ku baahay, gabayadaa oo ay gebiyada kore hayso murti iyo halqabsi. Bal waxaad u fiirsataa gabayadan aan dhammayn ee Qamaan naga soo gaadhay.
Midka hore, Sayid Maxamed oo Ingiriis iyo Xabashi u salab uruursanaya ayaa wafdi usoo diray Qorraxeey si ay tolalkaa hub iyo cudud kaleba uga helaan. Rag baa soo dhaweeyey wafdigii Sayid Maxamed ka yimid kuna taliyey in Daraawiish la garab istaago. Qamaan waxay ugu muuqatay in go’aankaa lagu degdegay, gorfayn iyo fiirsasho dheeri ah in xaalku mudan yahay ayuuna muujiyey. Dadka qaarbaa waxay wariyeen inaan Sayidka iyo Qamaan xilligaa aad isugu fiicanayn. Si kastaba ha ahaatee, Qamaan wuxuu soo jeediyey inaan wax cudud ah xagga Daraawiish tolkii ka aadin. Isagoo aragtida noocaa ah gabay kusoo gudbinaya, haddii taladiisa la khilaafana cidhib xumada ka dhalan karta ka digaya ayuu wuxuu yidhi:
Hadday sababi geli maanka waa, la iska suushaaye
Sinbiidh gaban ah yaa laga dhigaa, saacadaad dhimane
Solina maysid taladii Illaah, seeg ku leeyahaye
Sirqiyo mawdka wuu ka hor dhintaa, bahal sanuun mooge
Maashaan la sarin waa dambay, sara kacaantaaye
Sakaarkaan la rogin kaa qarsoon, sabarradiisiiye
So’du waxay ka qudhuntaa halkaan, hilibku saafnayne
Hadalkaan saxnayn wuxuu taraa, sun iyo waabaye
Libaax iyo waxaa seertay meel, sogob dameeraade
Wuxuu yidhi samaan aan u cabnee, suruq ka dhawr miirta
Waxay tidhi sedkaygaan ba’sane, ha ina sooyaamin
Wuxuu yidhi si kastood falaysaba, biyaha hayna wada seejin
Waxay tidhi armaad sibir qaskaa, sir ula jeeddaaba
Wuxuu yidhi haddaad sidatan tidhi, sahay ka qaadoo tag
Waxay tidhi inkastood sidaa tidhi, sayndhow dayn maayo
Dabadeedna suluftii lugtiyo, gelisay suulkiiba
Isaguna ku sarajoogsayoo, madax saydhyoo dil
Dumarkaa sabaalo iyo been, sahal la taabaaye
Oo lagu siraa waxaan ku siin, Soobir iyo liige
Oon saarsanayn waxaad ku fali, kaana sarar weyne
Dabadeedna saamaxa intay, meher ku saartaane
Sokeeyaha demani waa la cayn, laguna saaweeye
Sida bahalka siig iyo ugaadh, sool aan kala joogno
Surka aynu keenoo miskaha, kala sintoolayno
Hadhow baa anuu sixir i helay, saarsi loo odhane
Dadow kala sibreey waxaan ka baqi, sulufkii xayskiiye
Haddii kalese goor salal dhiciyo, saadembe i sheega
Mar kale ayaa waxaa la yidhi niman Qamaan ay is xiggaan oo boqol kor u dhaafay ayaa iyagoo aad u hubaysan ku biiray Daraawiish oo markaa meel Dhababe la yidhaahdo degan. Qamaan arintaa wuu ka xumaaday. Intii aanay wali nimankaasi ambabixin ayuu Qamaan wuxuu yidhi “ilma adeerayaalow waynu is naqaanaa oo waad madaxnimo jeceshihiin, Sayid Maxamedna cid ka hortimaadda idinkaa u horrayn doona ee hubkiina iyo ciidankiina haysta.” Nimankaasi taladaa ma qaadanin sidii uu sheegayey ayeyna noqotay oo muddo gaaban ka dibba khilaaf ayaa soo baxay. Khilaafkaasi isaga oo uu jiro, welina Gondo Gooye uusan dhicin ayey niman wafdi ahi Sayid Maxamed gaadheen. Maxay tolow ka dooneen isagoo is leh ayuu wuxuu mariyey gabay ay ku jirtay:
Nimankii dhabbaha qaadi jiray, dhawr ninbaa tagaye
Way u dhuuman meelay bideen, dhogorta xoolaade
Rabbi dhuunta goo waa waxay, Dhabab sameeyeene
Dhifbaa wadaye dharag way qabeen, amase dheeraade
Dhiil Eebbehay buuxiyey, dhoorayaan waliye
Gus dhallaan ku yaaleey noqdeen, dhimashadoodiiye
Dhanna uma ogola reer tolkood, dhimiyo noolowe
Dhafoor layska toogtiyo dilbaa, niman ku dhiitaane
Nabadda way dharaar furi colkana, kama dhabbeeyaane
Gabay kale oo aan sheekadaa kore lug ku lahayn ayeynu raacinaynaa. Waxaa la yidhi Ugaas Xaashi oo ahaa ugaas Qorraxeey ka talin jiray ayaa Qamaan ku yidhi: ‘Qamaan, Reer Xandulle sadada kasoo uruuri.’ Reer Xandulle waa jilibka hoose ee Qamaan ka dhashay, sadaduna waa xoolo canshuurta oo kale ah oo ugaaska iyo boqortooyadiisa lagu dhaqaaleeyo. Qamaan wuxuu ku jawaabay ‘Ugaas qaybtaydii waa tan, Reer Xandullena adaa ugaas u ah ee ciidan sadada kasoo uruuriya u dir.’ Ugaas Xaashi wuxuu u qaatay in hadalkaa cudur ku jiro, xabsiga ayuuna Qamaan u taxaabay. Qamaan isagoo arintaa qaadan la’a ayuu gabaygan soo socda mariyey. Waa gabay colaadeed aadse u murti badan. Colaadda faraha ka qaad oo murtida gabayga ku xasil. Wuxuu yidhi:
Gartay weeye inaan Maxamedow, galangalceeyaaye
Garanmaayo gegidaan hurdee, gogol la’aaneede
Goor iyo ayaan waxaan jiraa, gooxa dibadeede
Gankii Caamir baan ahay asaan, go’inin waagiiye
Waxaa ila gudboon ciil inaan, gag u idhaahdaaye
Sidii goodir guul ooman iyo, gebogebow jooga
Ama giiryar oo labo qaddoo, gamashi kaynaana
Ama guuto soo bixitintoo cido, ku guuraysa
Ama roob gudgude oo saqdhexe, galo biyeynaaya
Ama goray gabnihii laga qabtoo, ganid ka yaabaaya
Ama naag ninkeedii go’oo, gocosha ooyeysa
Ama aar intuu reer gondolay, miciyo weyn geystay
Ama faras mirtuu goosan jiray, xadhiga loo gaabshay
Ama gaadhkii laga hayn jiriyo, gaardigii Maxamed
Ama ceel galloobey oo qodada, lagu garaacaayo
Arrin igu gardaadaan jifida, gawda ku hayaaye
Birtay iga gasheen bay minjuhu, ila gariiraane
Mase gaasa-bixin oo ninkaa, gaambin baan ahaye
Galaal xoorka way ila qabaan, gebi Bah Gaalaade
Kuwii boqorka gaafa u lahaa ima, gol dhaamaane
Geed iyo guddooniyo gambare, waw gudboonahaye
Anoo madiya libintaan gasbado, way garaad li’iye
Haddayse gacani waa jeer dambee, godob walaal raadin
Barkhadleba gubney wada dhasheen, guul ku odhan waaye
Arbow Caafi galabbaan ciyaar, guduri hiigeene
Gaashaanna waad wada qabtaan, gaaska Reer Cumare
Cabdi Kaahin gaar kama noqdeen, guudka xaajada e
Gar ma marinin guuyana ma siin, mana garaabayne
Goodaado dhexe bay baryeen, gaankii Reer Dalale
Kuwaasaana iila giir adkaa, garashadaydiiye
Bal maxay la gabangaabsadeen waa, hal gudo weyne?
Haddoon laba galloobiyo anoo, gabana oo wiila
Intaasaan xaqood gudi lahaa, gooshigii da’a e
Eeggana gadhkiyo xaaddu way, galayaxoobeene
Farow gaabta wixii bataa, geel bariis noqoye???
Reer Magan ha kala geed hadhsado, layla garan waaye
Ha gudduudatoo yaan shamsadu, giirka ka caddaanin
Gabbal yuusan dhicin waana baryin, gooriyo ayaane
Ha lays galo ninbaa gudin la dhacay, geed qudhaanjo lehe
Waaa abwaan inta badan hadalkiisu yahay muri iyo xigamad aan naga dhamaan waana abwaan ku dayasho mudan bulshadana wax weyn u qabtay.
Tags: Murtida Jimcaha "Abwaan Qamaan Bulxan"
Next post Luuqadaha Dunida & Af-soomaaligii
Previous post QISO CAJIIB AH: Ka Tusaalle Qaado Qisadii Malik Ibn Dinar
May 15, 2018 at 3:36 am	— Reply